Waare oo Xabsi Guri lagu geliyey Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Villa Somalia ayaa xabsi guri Muqdisho ku gelisay Madaxweynaha waqtigiisu dhamaadey ee HirShabeelle xilli ay Jowhar ka socoto qaban-qaabadda doorashadda Maamulkiisa.
Illo lagu kalsoon yahay, oo ku dhaw Madaxtooyadda ayaa Keydmedia Online u sheegay in Maxamed Cabdi Waare loo diiyay inuu ka baxo Muqdisho, kadib markii uu kasoo horjeestay jadwalka doorashadda ee uu soo saarey gudiga farsamadda HirShabeelle.
Xogta ayaa sheegaysa in go'aanka lagu xanibay Waare uu soo saarey Fahad Yaasiin, oo la sheegay in isaga iyo Farmaajo isla wadaan nin kasoo jeeda beesha Abgaal oo ay Madaxweyne uga dhigayaan HirShabeelle.
Ujeedka ayaa ah in Muqdisho lagu sii hayo Waare oo mudo-xileedkiisa dhamaadey 17-kii bishan, illaa laga dhameynayo howsha doorashadda Xildhibaanada iyo Madaxweynaha Cusub.
Maalmo kahor, Keydmedia Online ayaa soo qortay [Halkan ka akhri] in Farmaajo uu kulan natiijo la'aan kusoo dhamaadey la qaatey Ugaaska Beesha Xawaadle, Ugaas Xasan oo ka diiday Madaxweynaha in beeshiisa laga wareejiyo sanadkan xilka Madaxweynaha.